China PDQ yakarongedzwa Hafu Pallet Ratidziro yeWalmart Stores vagadziri uye vanotengesa | Raymin
Model Nhamba: GFPD20200705
Saizi: W48 `` x D20 '' x H48 ''
zvinhu Yakasimba B nyere + 350gsm CCNB
Kudhinda: CMYK Kudhinda
Kupedzisa kwekupedzisira: Glossy Varnish
Nzvimbo yeKutanga: CN
Zita Rekushandisa: Raymin Ratidza
Minimum Order Yakawanda: 100pcs
Mutengo: Tarisa nesu
Kavha Details: Gungano rakazara nezvigadzirwa mu
Nguva yekuendesa: Mazuva gumi nemashanu e5,000pcs
Mharidzo kutungamira nguva 3 mazuva
Muenzaniso Charge 150 $, inodzoserwa mushure mekurairwa kwakawanda kusimbiswa
Mitemo yekubhadhara: L / C.
Kupa Mazano: 100,000 pcs pavhiki
Dhizaini dhizaini Hafu Pallet kuratidza dhizaini
Mifananidzo / graphic Yakasarudzika
Mifananidzo fomati PDF, AI, PSD, PS
Imwe nzira yekukwezva vatengi kutarisisa ndeyekudhinda kwemhando yepamusoro pazviratidzwa zvako. Izvi zvinogona kuitwa nekuratidzira logo yekambani yako, kuratidza yako yekumaka kana kuratidza chigadzirwa nenzira inooneka inofadza. Kunyangwe iwe uchisarudza kuratidzwa pasi, akarembera zvitoro zvekutengesa kana mubati webhurocha, tsika yakadhindwa makadhibhodhi kuratidzwa kunogona kutungamira kukutengesa kwepamusoro. Point of Purchase (POP) kuratidzwa kunozivikanwa kupa yakakwira kudzoka pane kudyara. Kuisa zvakagadzirwa zvakagadzirwa uye zvine mavara zvigadzirwa zvichitenderedza chitoro chako uye pakubuda zvinobatsira kukwevera maziso evatengi vako kune zvigadzirwa zvako. Isu tinopa akawanda akasiyana marudzi ekudhinda kusangana nevatengi vedu 'zvido. Nemaitiro edu akasiyana-siyana ekudhinda, unogona kusarudza kuti ndeipi masitayera anozokodzera zvaunoda pakuratidza uye bhajeti. Hazvina basa kuti ndeapi masitaira aunosarudza, iwe unogona kutarisira zvakanakisa nemidziyo yedu yepamberi uye pane-saiti Certified manejimendi manejimendi manejimendi.
Kugona kwedu kunosanganisira:
1. Maitiro aya anoshandiswa kusangana neyako yepamberi yepamusoro kudhinda zvido.
2) Flexography: Iyi bhajeti-inoshamwaridzika masisitimu inosanganisira kudhinda logo yako kana hunyanzvi yakananga pabhodhi. Izvi zvinowanzo sanganisira pakati peye kana matatu mavara. Iyi bhajeti-inoshamwaridzika masisitimu inosanganisira kudhinda logo yako kana hunyanzvi yakananga pabhodhi remarata. Izvi zvinowanzo sanganisira pakati peye kana matatu mavara.
3) Dhijitari: Munguva iyi maitiro, isu tinoshandisa izere-ruvara kuprinta zvakananga kubhokisi remarata remushonga unodhura. Izvi zvakakosha kumwaka kana pfupi-kwenguva sampuli. Kana iwe uchida rubatsiro kusarudza kuti ndeapi akadhindwa makadhibhokisi ekuratidzira achashanda zvakanyanya kune yako projekiti, ndokumbira utipe runhare. Tichave tichifara kukurukura zvaunogona uye kupa mazano eunyanzvi.
4) Raymin Ratidziro inoitisa ese edu magadzirirwo uye kudhinda-mumba. Isu tine kutonga kuzere pamusoro pehunhu uye nekumhanyisa kweprojekiti yega yega kuitira kuti iwe ugare uchiziva chaizvo kuti uchagamuchira riini odha yako. Nedu pane yedu saiti-ndiro-setter, isu tinopa humbowo hwemavara mukati maawa makumi matatu nematanhatu. Isu tine inopfuura 99% pa-nguva muzana nekuda kwemabasa edu emumba. Raymin Ratidza inopa mabhenefiti mazhinji ayo anotisiyanisa isu kubva pamakwikwi.
Seye ISO 9001 / FSC / BSCI inosimbiswa kambani, zvigadzirwa zvedu zvinocherechedzwa nenzira yepamusoro yepamusoro indasitiri zviyero. Nhanho yega yega dhizaini yedu, yekugadzira uye yekudhinda inoitwa zvine hungwaru kudzora kwemhando yepamusoro kuona kuti mhedzisiro ichapfuura zvaunotarisira. Uye zvakare, isu tinozvirumbidza panzira yedu yakasvibirira, tichishandisa zvinhu zvakavakwa kubva ku100% zvinhu zvinogadziriswazve. Tsika yakadhindwa makadhibhokisi ekuratidzira anomira anopa risingaperi mukana wekusimudzira vatengi kuita. Nemavara ane mavara, emhando yepamusoro, ako ekuratidzira anogona kusimudzira bhizinesi rako uye nekuwedzera chiziviso cherudzi. Ivo zvakare vanopa inoona-inobata uye inopindirana kuratidza kuti iwedzere mune-chitoro kubatanidzwa. Raira Yako Tsika Yakadhindwa Makadhibhokisi Anoratidza Nhasi. Shambadzira zvigadzirwa zvako netsika yakadhindwa yekuratidzira kumira kubva kuCreative Displays Izvozvi. Nemhando dzakasiyana dzemaitiro uye ekudhinda sarudzo, isu takawana kukodzera kwakaringana kune chero bhizinesi. Tanga nekukumbira fungidziro nhasi! Une mibvunzo mishoma nezve zvigadzirwa zvedu? Inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Pashure: Chipo Chekuputira Center Marara emabhini anoratidza kwePati zvigadzirwa musanganiswa
Zvadaro: Smart 3 tier PDQ kurongedza bhokisi remakiyi emaketani, pakaunda kuratidzwa kwekutengesa kupisa
Flat yakarongedzwa Costco Yakazara Pallet Ratidza yeFrui ...
Chipo Kuputira Center Marara emabhini anoratidza ePart pr ...